Dharkeynleey oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dharkeynleey oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka
Dharkeynleey oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka
Habeenkii Toddobaad ee tartan ciliyeedka warbaahinta Qaranka ee uu taabagelinayo maamulka Benaadir, waxaa ku tartamay degmooyinka Kismaayo oo ka tirsan Jubbada Hoose iyo Dharkeynleey oo ka tirsan gobolka Benaadir.
Labada degmo, waxaa loo gudbiyey toddobada su’aal ee tartanka, qeybta hore waxaa lagu hakiyey min afar su’aal kaddib waxaa lagu soo bandhigay qeybta nasashada warbixinnadii ka hadlayey taariikhda labada degmo ee Kismaayo iyo Dharkeynleey.
Kismaayo waxaa la weydiiyey toddobo su’aal, waxa ay ka jawaabeen hal su’aal Lix waa ay iska qaldeen, wax ka faa’ideysi ahna ma helin, sidaas ayeey laba dhibcood ku heleen.
Tartamayaasha Dharkeynleey, waxaa la weydiiyey toddoba su’aal toddobada su’aal midna kama jawaabin, si ka faa’ideysi ah ayeey saddex su’aal u heleen, sidaas ayeey ku uruursadeen Lix Dhibcood, sida guddiga shaaciyeyna Dharkeynleey ayaa u gudubtay wareegga labaad ee tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka habeenkii toddobaad.
Habeen dambe sida guddiga sheegay waxaa tartami doona degmooyinka Xamar Jajab iyo Wadajir oo ka wada tirsan gobolka Benaadir.
Previous articleDiyaarad ku burburtay garoonka Garbahaarey
Next articleDowladda Soomaaliya ayaa Faahfaahin ka bixisay Halka uu maraayo howlgalka Xasilinta caasimadda Soomaaliya.